मुन्दुम : लयको महासागर- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
मुन्दुम : लयको महासागर
किरात राई समुदायभित्र मात्र मुन्दुम गायन गर्ने चार–पाँच सय धामी र रिसिमी होलान् । भन्नुको अर्थ अहिलेसम्म करिब पाँच सयथरी लय जीवितै छ । यो सानो बौद्धिक सम्पदा होइन, नेपाली समाज र संगीतका लागि ।
माघ ११, २०७६ भोगीराज चाम्लिङ
सांगीतिक क्षेत्रमा एउटा ठट्टा खुबै प्रचलित रहेछ, ‘किरात राई समुदायको कुनै गायक–गायिका भेटियो भने उसलाई कुन जिल्लाको भनेर नसोध्नू । बरु सीधै सोध्नू— खोटाङ कुन ठाउँको हो ?’ हुन पनि हो, ‘राई इज किङ’ अर्थात् राजेशपायल राईदेखि अहिलेकी ‘हिट’ गायिका मेलिना राईसम्म खोटाङकै हुन् ।
किन किराती समुदाय संगीतमा यसरी अगाडि आइरहेको छ ? संगीत क्षेत्रमा किन उनीहरूको उपस्थिति बाक्लो छ ? यसका थुप्रै कारण होलान् तर एउटा हो— किराती समुदाय मुन्दुम परम्परामा हुर्किएको हुनाले संगीतसँग उनीहरूको जन्मजात लगाब ।
किरात राई मात्र नभएर सिङ्गै किराती समाजमा संस्कार गर्दाका बखत नछुङ (धामी) र रिसिमीहरूले मुन्दुम गायन गर्छन् । हजारौं वर्षदेखि उनीहरूको जीवनको अभिन्न पक्ष भएर अहिलेसम्म निरन्तर छ मुन्दुम गायन । त्यसकारण मुन्दुमको लय सुन्दै हुर्किएका किरातीहरू गीत–संगीतमा आएनन् भनेचाहिँ आश्चर्यको कुरा हुन्छ । उनीहरू साहित्यमा, अभिनयमा, ललितकला इत्यादिमा आएनन् भनेचाहिँ आश्चर्य हुन्छ । उनीहरूले नयाँ सिद्धान्त निर्माणको कुरा गरेनन् भनेचाहिँ आश्चर्य हुन्छ ।
मेरो विचारमा किराती संगीतलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ— मुन्दुमी र लोकगीत । मुन्दुम समग्र किरातीहरूमा प्रचलित आदिम संस्कारगीत हो । किराती लोकगीत–संगीतको बीउ मुन्दुम नै हो । यसका थुप्रैमध्ये चार मौलिक विशेषता निम्न बुँदामा समेट्न सकिन्छ : एक, नछुङ (धामी) अथवा संस्कार गर्ने व्यक्ति मात्र मुन्दुमको गायक हुन्छ । आम सर्वसाधारणले मुन्दुम गाउनु हुँदैन, हानि गर्छ भन्ने मान्यता छ । तर, धामीहरू किराती समाजका मुन्दुमी गायक मात्र होइनन्, आदिम समाजले विकास गरेको बौद्धिक पनि हुन् । उनीहरू गायक पनि हुन्, व्याख्याता पनि हुन् ।
दुई, मुन्दुम गायनको लयमा विविधता छ । २०६८ सालदेखि मुन्दुम संकलन र अध्ययन गर्दाको मेरो अनुभवले भन्छ, मुन्दुम गायन गर्ने लयमा विविधता मात्रै होइन, ज्यादै धेरै विविधता छ । जति छन् धामीहरू, त्यतिथरी नै छ लय पनि । त्यसैले गीत–संगीतको आँखाबाट हेर्दा मुन्दुम भनेको लयको महासागर हो । मुन्दुमी लयको विविधता एक धामी र अर्को धामी अथवा एक रिसिमी र अर्को रिसिमीबीच मात्रै छैन, एउटा संस्कार र अर्को संस्कारबीच पनि छ । त्यही धामीले एउटा संस्कार गर्दा एउटा लयमा मुन्दुम गायन गर्छ, त्यही धामीले अर्को संस्कार गर्दा अर्को लयमा मुन्दुम गायन गर्छ । किरात राई समुदायभित्र मात्र चार–पाँच सय हाराहारीमा मुन्दुम गायन गर्ने धामी र रिसिमीहरू होलान् । भन्नुको अर्थ अहिलेसम्म पनि चार–पाँच सयथरी लय जीवितै छ । यो सानो बौद्धिक सम्पदा होइन नेपाली समाज र संगीतका लागि ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, धामीहरूले चिन्ता बस्दा सबैभन्दा पहिला एउटा आवाज निकाल्छन्— सुइऽऽऽ । यो अर्थबिनाको ध्वनि मात्र हो । तर, मलाई लागेको चाहिँ के भने यो आदिम ध्वनि हो जुन सिकार खेल्दा अथवा सामूहिक संकेत गर्नुपर्दा प्रयोग हुन्थ्यो । अहिले पनि सिकारी र फिरन्ते जीवनमै रहेका राउटेहरूले सिकार गर्नुपर्दा यस्ता सांकेतिक ध्वनि निकाल्ने गरेको पाइन्छ जो । यसरी हेर्दा मुन्दुम भनेको सिकारी युगका ध्वनिदेखि कृषियुगसम्मका शब्द–संगीतको मौखिक संग्रह हो ।
मान्छेहरूले यसरी गाउन सक्ने भएको कहिलेदेखि होला ? वैज्ञानिकहरूका अनुसार हाम्रो नाक चुच्चो भएर माथि उठेको १५ लाख वर्ष भयो । भन्नुको अर्थ गाउनका लागि चाहिने श्वासप्रश्वास प्रणालीको विकास १५ लाख वर्षपहिले भयो । त्यो बेला हाम्रा पुर्खाहरूले गीत गाए कि गाएनन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर गायनका लागि अनुकूल शारीरिक विकास भने १५ लाख वर्ष पुरानो हो । आवाज र बोलीको विकास गर्नु मानवजातिका लागि धेरै ठूलो उपलब्धि थियो (द ओरिजिन अफ म्युजिक, सम्पादक निल्स डब्ल्यू वालिन, बिजोर्न मर्कर एन्ड स्टेभन ब्राउन) जसको उपज हो अहिलेको मानवजातिको सवर्तोमुखी उच्चत्तम विकास ।
मानवशास्त्रीहरू के अनुमान गर्छन् भने मान्छेले लगभग ४ लाख वर्षपहिले अथवा अझ अगाडि नै प्रारम्भिक स्वरूपको संगीतको विकास गरे । चार–पाँच लाख वर्षपहिले नै मानव पुर्खाहरूको मस्तिष्कको आकार बढिसकेको थियो र त्योसँगै संवेगात्मक क्षमता पनि विकास भएको थियो । सम्भवतः त्यसबखत मान्छेले शारीरिक हाउभाउ मात्र होइन, आफ्नो भावना अभिव्यक्त गर्न आवाजको पनि प्रयोग गर्न थालेको थियो (एन्टोन किल्लिन, ‘द ओरिजिन अफ म्युजिक’, सन् २०१८) । संगीतको विकास लाखौं वर्ष र हजारौं पुस्ताको सिर्जनात्मक देन हो । सामूहिक श्रमको उपज हो । किनभने, आदिम समयमा संगीत मनोरञ्जनभन्दा आवश्यकता थियो ।
कामलाई अझ बढी उत्पादनशील बनाउन पुर्खाहरूले धुनको विकास गरेका थिए (मार्क्सवाद र संगीत, अनुवाद निनु चापागाई, २०६७) । त्यो पछि गएर समाज र संस्कार–संस्कृतिको अभिन्न अंग बन्न पुग्यो जसको प्रत्यक्ष साक्ष्य हो मुन्दुम । तीन, मुन्दुमी संगीत संस्कारसँग अभिन्न रूपमा सम्बद्ध रहेको छ । जन्मदेखि मृत्युसम्म हरेक संस्कार र संस्कृतिमा नछुङ (धामी) हरूले मुन्दुम गाउने गर्छन् । संस्कारसँग नजोडिएको भए सायद मुन्दुमी संगीत बाँकी रहने थिएन । फेरि मुन्दुम नजोडिएको भए संस्कार पनि जीवन्त हुने थिएन ।
चार, मुन्दुम गायन गर्दा एकै खालको मात्र धुन निस्कने बाजा प्रयोग हुन्छ । मुन्दुम गाउँदा प्रयोग हुने बाजा भनेको मूलतः ढोल, थाल, झ्याम्टा र घण्टी हो । जसरी सारंगीको तार रेट्दा थरीथरी धुन पैदा हुन्छ, मुन्दुम गायन गर्दा बजाइने यी बाजाबाट त्यस्तो विविध धुन पैदा हुँदैन । यी बाजाका लयका आधारमा धामी या आम किरातीहरूले नृत्य गर्ने गर्छन् जसलाई सिली टिप्नु, सिली गर्नु भनिन्छ । त्यस्तै गरेर पात बजाउने प्रचलन पनि किरात राई जातिमा ज्यादै धेरै छ । रूखका चिल्लो पात ओठमा च्यापेर निकालिने धुनले किरात राई बस्तीका रनवन घन्किरहेको हुन्छ । सम्भवतः सिकारी जीवनमा छँदाको बखत प्रयोग सुरु भएको आदिम बाजा हुनुपर्छ पात ।
पुरातत्त्वविद्हरू अनुमान गर्छन् कि हातको ताली नै पहिलो बाजा हो । त्यस्तै लाठी जुधाएर आउने आवाज, ढुंगा बजाएर आउने आवाज नै प्रारम्भिक बाजा र संगीतका ध्वनि हुन् । त्यसपछि मानवले प्रयोग गरेको संगीतको साधन भनेको पशुपन्छीहरूको हाड हो । सायद त्यसैको झल्को आजकलका धामीहरूले चलाउने सामग्रीमा देख्न सकिन्छ । उनीहरूले पशुपन्छीका हाड आफ्नो सांस्कृतिक सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्ने गर्छन् । चिन्ताहरू गर्दा उनीहरूले यस्तो हाड थानमा राख्ने गर्छन् र कतिपय संस्कारमा बजाउने पनि गर्छन् । त्यस्तै अर्नाको सिङ पनि किरात राई धामीहरूले प्रयोग गर्ने अर्को बाजा हो जसले प्राग्ऐतिहासिक समयको झल्को गराउँछ ।
उत्तर अमेरिकाका सिकारी जीवन बिताइरहेका एउटा जातिको अध्ययनले के देखाएको छ भने उनीहरूका बाजाबाट एक प्रकारको मात्र आवाज आउने गर्छ जसमा ठोक्दा बज्ने ढोल, घर्षण गर्दा बज्ने बाजा अनि गोरुको सिङजस्तो बाजाहरू पाइएका छन् । उनीहरूको ढोल छालाले मोहरेर बनाइएको हुन्छ । काठका लठ्ठीहरू जुधाएर आवाज निकालिन्छ । किरातीहरूले अहिले प्रयोग गर्ने बाजाहरू पनि यस्तै छन् । उनीहरू संस्कार गर्दा, सामाजिक नृत्यहरू गर्दा, युद्धका नृत्य गर्दा संगीत बजाउने गर्छन् । उनीहरूका शब्दभन्दा ध्वनि मात्र निकाल्छन् । र, त्यस्तै सांकेतिक नृत्य गर्छन् । जस्तो कि किरात राईहरूको साकेला र लिम्बूहरूको केलाङ नृत्य । समाजका सबैभन्दा जान्ने मान्छेले गीत गाउँछ अथवा जसले गीत गाउँछ उसलाई सबैभन्दा धेरै ज्ञानी मानिन्छ ।
जस्तो कि किराती धामीहरू । उनीहरूले गीतमा आफ्नो अलिखित इतिहास, सामाजिक नियमका कुराहरू गर्छन् । आत्मिक कुरा, आफ्नो थातथलो र प्रकृतिप्रेमका कुराहरू गर्छन् । बिरामी निको पार्ने, रोग हटाउने कुराहरू गर्छन् । जस्तो कि किराती मुन्दुम । यो सानो तुलनाले पनि किरातीहरूको मुन्दुमको लय र बाजाहरूको आदिमता आकलन गर्न सकिन्छ ।
आजसम्म मानवजातिले विकास गरेको संगीतबारे अध्ययन गरेका विद्वान् विलियम एल बेन्जोन समग्र संगीतलाई तीन चरणमा विभाजन गरेर हेर्छन् । उनी के भन्छन् भने प्रथम चरणको संगीतमा ताल या लयमा नियन्त्रण गरेर धुन निकालिन्थ्यो । यो भनेको भाषाको विकास भएको लगभग एक लाख वर्षदेखि लेखनकलाको विकास नभएसम्मको अवधि थियो । सायद यही अवधिको बाजा हो अहिले प्रचलित किराती धामीको ढोल ।
दोस्रो चरण थियो रागमा आधारित संगीतको । यो भनेको लेखनकला र सहरको विकास अनि कृषि गरेर स्थायी बसोबास गरिसकेपछिको अवधिको संगीत हो । यो अवधिमा विकास गरिएका किराती बाजाहरू हुन् थाल, झ्याम्टा र घण्टी । अनि तेस्रो चरणचाहिँ औद्योगिक क्रान्तिपछिको अवधि हो जुन ताल र रागलाई एकताबद्ध गरेर विकास भयो (‘स्टेजेज इन द इभोलुसन अफ म्युजिक’, सन् १९९३) ।
मुन्दुमचाहिँ ताल या लयमा नियन्त्रण गरेर गायन गरिने प्रथम चरणको संस्कारगीत हो । यसमा रागको कुरा हुँदैन । बरु यसमा दस हजार वर्षअघि खेतीपाती सुरु भएको कागुनी प्रजातिका अन्नहरूको सन्दर्भ खुबै आउँछ । आत्मवाद र पितृपूजाको कुरा महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा आउँछ । आदिम मानवहरूले विकास गरेको चिन्तन ‘एनिमिजम’ (जीवात्मवाद) को कुरा एकदमै धेरै आउँछ । जुन कुराका आधारमा मुन्दुम र मुन्दुमको लय आदिम हो भन्न सकिन्छ ।
एनिमिजम अर्थात् जीवात्मवादी अवधारणाले पशुपन्छी र प्रकृतिलाई पनि मानवीकरण गर्छ अर्थात् मानवस्व रूपमा परिकल्पना गर्छ । चराचुरुंगीहरू मानवसँग संवाद गर्छन्, मानवका सहयोगी बन्छन् । पशुहरू मानवसँग संवाद गर्छन्, मानवका सहयोगी बन्छन् । यसप्रकारका अनेकौं मुन्दुमी मिथक छन् । जस्तो कि सुम्निमा (नाइमा) का लागि केटा खोज्न जाने लमी चरा थियो । सुम्निमा (नाइमा) गर्भवती हुने बखत पानी खोज्न जाने चराहरू नै थिए । किरात राईहरूले खुबै श्रद्धा गर्ने मातृहरू तयामा र खियामा पनि चरा नै थिए । अन्य पशुप्राणीसँग सम्बन्धित यस्ता मिथकहरू पनि थुप्रै पाइन्छन् तर मुन्दुममा संगीतसँग सम्बन्धित मिथक चराको मात्र पाइन्छ ।
मुन्दुमी मिथकअनुसार आदिम समयमा मान्छे होइन चराहरू धामी थिए । त्यो चराधामीलाई अहिले पनि मुन्दुममा ‘मबुमी कुपुमी’ भनेर पुकार गरिन्छ । खस–नेपाली भाषामा यो भनेको काफलपाक्यो चरा हो ।
मुन्दुमअनुसार त्यही मबुमी कुपुमी (काफलपाक्यो) चराबाट सिकेर मानवहरू धामी बनेका हुन् । र, प्रथम मानवधामी हर्कबुङ थियो । किरात राईहरू हर्कबुङका सन्तान मानिन्छन् । चराहरूलाई प्रथम धामी मान्नुको अर्थ हो— चराहरूबाट गायन कला अनुकरण गर्नु । गायन मात्रै होइन, बाजाका तालहरू पनि चराबाट सिकेको कुरा मुन्दुममा आउँछ । धामीले घरपरिवारको शान्तिसुरक्षा अथवा मृतात्मालाई बाटो लगाउने चिन्ता गर्दा ढोलको एउटा ताल बजाइन्छ जसलाई धोबी ताल भनिन्छ । धोबी चरा भुइँमा जसरी उफ्रिन्छ, कुद्छ त्यही चालको अनुकरण गरेर बजाइने ताल हो धोबी ताल । यसरी किराती गायन र वाद्यवादन दुवै चराबाट धेरै हदसम्म प्रभावित भएको मुन्दुमी मिथकबाट थाहा हुन्छ । पुरातात्विक अध्ययनहरूले पनि यो कुरा तथ्ययुक्त रहेको देखाउँछ ।
आजसम्मको अध्ययनको कुरा गर्दा मानवले प्रयोग गरेको सबैभन्दा पुरानो बाजा ४० हजार वर्ष पुरानो बताइएको छ । र, त्यो बाजा बाँसुरी हो । र, त्यो बाँसुरी चराको नलीहाडबाट बनेको छ जुन जर्मनीमा उत्खननका क्रममा प्राप्त भएको हो । ती बाँसुरी गिद्ध र हाँसका हाडबाट बनाइएका हुन् (एन्टोन किल्लिन, ‘द ओरिजिन अफ म्युजिक’, सन् २०१८) । यस्तै चराकै हाडबाट बनाइएको बाँसुरी जर्मनीकै गेइसेनक्लोस्टेर्ल गुफा र फ्रान्सको इस्तुरिज गुफामा पनि फेला परेको छ जुन ३२ हजार वर्ष पुरानो मानिन्छ (रिचार्ड जी क्लेन एन्ड ब्लेक एडगर, द डन अफ् ह्युमन कल्चर, सन् २००२) ।
बाजाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी पाइएको चराका हाडहरूकै हो । पुरातत्त्वविद्हरूले चराबाहेक बाह्रसिंगेको अगाडिको खुट्टाको नलीहाडलगायत पशुहरूका हाडबाट बनेका बाजाहरू पनि फेला पारेका छन्, तर तुलानात्मक रूपमा कम । सायद प्वाल पारेर बाँसुरी बनाउने कलाको विकास गर्नुभन्दा पहिले प्वाल नपारिएका हाड बजाइन्थ्यो जुन किराती धामीहरूले अहिले पनि आफ्नो सांस्कृतिक सामग्रीका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । चराकै हाडबाट बाँसुरी किन ? सायद यो प्रश्नको जवाफ मुन्दुमले केही हदसम्म दिएको छ । प्रकाशित : माघ ११, २०७६ ०९:३७
साकेला किराँत राईको बसाइँसराइसँगै नेपालका प्रायः सहरमा पुगेको छ । अर्थात्, साकेला गाउँबाट सहरतिर पसेको छ । सहरबाट विदेशतिर पुगेको छ । सहरबाट मात्रै चीजहरू गाउँतिर जाँदैनन्, गाउँबाट पनि सहरतिर पस्दारहेछन् ।
मंसिर २८, २०७६ भोगीराज चाम्लिङ
जिन्दगीमा उमेर खाएर मात्र नहुने रहेछ— बल्ल अहिले साकेला प्राग्ऐतिहासिक संस्कृति हो भन्ने बुझ्दै छु  । हलेसी क्षेत्रका राईहरूलाई नफापेर धेरै पहिला छाडेका कारण मलाई साकेला पर्वबारे खासै थाहा थिएन  ।
दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पस (खोटाङ) मा पढ्दा साथीहरूको पछि लागेर २०४९ सालतिर सोल्मा गाउँमा प्रथमपटक साकेला सिली (नृत्य) हेरेको थिएँ । गोलोगोलो घेरा बनाएर थुप्रै समूहमा दर्जनौं मान्छेले हात र खुट्टाको चाल मिलाउँदै सिली टिपेको अर्थात् नृत्य गरेको देख्दा जिन्दगीमा पहिलोपटक अचम्मित भएको थिएँ, ‘अरे कस्तो नाच हो यो !’
हामी त गाउँमा देउसी खेल्दा, नाटक देखाउँदा अथवा विद्यालयले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा बढीमा चार–पाँच जनाको समूहमा नाच्थ्यौं । साकेलामा त दर्जनौं मान्छे एउटै गोलो घेरा बनाएर नाचिरहेका थिए । हर हिसाबले साकेला विशाल सामूहिक उत्सव देखिन्थ्यो । हो पनि रहेछ ।
अहिले साकेला किराँत राईहरूको बसाइँसराइसँगै नेपालका प्रायः सहरमा पुगेको छ । विदेशमा पनि जहाँजहाँ किराँत राई पुगेका छन्, त्यहाँत्यहाँ प्रसार भएको छ । अर्थात्, साकेला गाउँबाट सहरतिर पसेको छ । सहरबाट विदेशतिर पुगेको छ । सहरबाट मात्रै चीजहरू गाउँतिर जाँदैनन्, गाउँबाट पनि सहरतिर पस्दारहेछन् भन्ने एउटा सांस्कृतिक साक्ष्य हो— साकेला । सहरलाई ध्यानाकर्षण गर्ने हैसियत बनाइसकेको साकेलाले हरेक वर्ष उँधौली (छिरिनाम) र उँभौली (धिरिनाम) मा दुईपटक सहरवासीलाई झकझक्याइरहेको छ । आजबाट यस वर्ष (२०७६) को उँधौली जो सुरु हुँदै छ । साकेला किराँत राई समुदायले उँधौली र उँभौलीमा मनाउने थुप्रैमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण पर्व हो, भूमिपूजा हो जसको किराँत राई भाषामा थुप्रै नाम छन्— साकेल् (कोयी), साखेल् (दुमी), साकेन्वा (बान्तावा), वास (खालिङ), तोसी (थुलुङ), तोस (कुलुङ, नाछिरिङ) इत्यादि । लिम्बू, याख्खा, सुनुवार (कोइँच), थामी, जिरेल, सुरेल, हायुलगायतका किराँती समुदायले पनि उँभौली र उँधौलीमा साकेलाजस्तै पर्वहरू मनाउँछन् ।
साकेला विशाल सामूहिक नृत्य–उत्सव हो । तर, प्रारम्भमा पक्कै यस्तो रुपमा थिएन । सायद आदिम समयमा एक–दुई दर्जन सदस्यीय शिकारी झुन्डको खुसियाली अभिव्यक्त गर्ने क्रममा उद्विकास भएको थियो । यसो भन्न सकिने थुप्रै आधार अहिले पनि उपलब्ध छन् । किराँत राई मिथकहरूले त्यही बताइरहेका छन् । स्वयं ‘साकेला’ शब्दकै एउटा अर्थ त्यही हुन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सिली (नृत्य) हो जसले साकेला पर्वलाई प्रस्टसँग सिकारी जीवनसँग जोडिदिन्छ ।
साकेला दुईवटा शब्द मिलेर बनेको समस्त शब्द हो— सा र केला । ‘सा’ का थुप्रै अर्थमध्ये एउटा हो मासु अथवा सिकार । ‘सिकार खेद्ने बाटो’ भन्ने अर्थमा उहिले नामकरण भएको भोजपुर, कटुञ्जे शिरको जंगलको नाम ‘साइलाम’ अहिले पनि प्रचलित छ, जसमा ‘साइ’ भनेको सिकार, ‘लाम’ भनेको बाटो हो (निराजन बतास, विसं २०६७, खोक्चिलिपा) । त्यस्तै ‘केल्’ भन्नुस् या ‘केला’ अथवा ‘केलाङ’ नै भन्नुस्, त्यसले अभिनय र नृत्यलाई जनाउँछ ।
जस्तो कि कोयी राई भाषा (तारामणि राई, विसं २०७१, साकेल्) मा ‘स’ को अर्थ ‘रूख’ र ‘केल्’ ले हाँसखेल या हलचल भन्ने अर्थ दिन्छ । हुन पनि रूखको फेदमा स्थापना गरिएको थानवरिपरि नै पूजा र नृत्य गरिन्छ साकेला मनाउँदा, भूमिपूजा गर्दा । त्यो रूखले प्रतीकात्मक रूपमा जंगल र सिकारी युगकै संकेत गर्छ । त्यसैगरी किराँत लिम्बूहरूमा प्रचलित विशेष नृत्य छ केलाङ । यो नृत्य उँधौली (चासोक तङ्नाम) र उँभौली (यक्वा तङ्नाम) का अतिरिक्त खुसियाली मनाइने पर्वमा पनि नाचिन्छ । किराँत राईहरूमा साकेलामा कृषि सिली पनि नाचिन्छ तर लिम्बू समुदायको केलाङमा पशुपन्छी र कीटपतंगहरूको चालढालको मात्र सिको गरिन्छ । यसमा कृषि युगका सिलीहरू थपिएको पाइँदैन । यी सप्पै कुराबाट भन्न सकिन्छ— सिकार गरिसकेपछि रमाएर नाच्ने कलाबाट नै साकेला सिली र केलाङहरू सुरु भएको हो ।
दोस्रो हो, साकेला सिली नाच्नेहरूले ढाडमा भिर्ने ठोक्रो र धनुकाँड अनि साकेला नृत्य गर्दा हातहातमा समातिने हरियो सेउली । धनुकाँडको सोझो सम्बन्ध सिकारी जीवनसँग छ । त्यस्तै सम्बन्ध छ सेउलीको पनि । यस्तो सेउली कटुसलगायत प्रजातिका हुन्छन् । साकेला नृत्य गर्दा सिलिमोपा (पुरुष नृत्यकार) र सिलमोमा (महिला नृत्यकार) ले हातमा सेउली लिने प्रचलन छ । यो भनेको जंगली अवस्था र सिकारी जीवनको प्रतिनिधित्व गर्ने संकेतचिह्न हो । जब आदिम पुर्खाहरूले सिकार गर्थे तब त्यसको खुसियालीमा रमाउन उनीहरूसँग उपलब्ध कुरा नै त्यही जंगलका सेउलीहरू थिए । उनीहरू हातमा सेउली लिएर हल्लाउँदै रमाउँथे, नृत्य गर्थे । यस्तो प्रचलन किराँत राईहरूमा केही सय वर्षअघिसम्म जीवित थियो । मैले हालै थाहा पाएको एउटा ताजा मिथककै कुरा गर्छु ।
दीपक राईले अमृतबहादुर राईबाट सुनेअनुसार, बँदेलले भोजपुरको छोङ्खा गाउँको अन्नपात धेरै खाइदियो । नाम्नु पाछा (वंश) का ससुरा सिपालु धामी थिए भने खारुरङ हाङ्खिम पाछा (वंश) का ज्वाइँ धनुकाँड चलाउन सिपालु सिकारी थिए । गाउँलेहरूले अनुरोध गरेपछि ससुरा–ज्वाइँ बँदेल मार्न धनुकाँड लिएर निस्किए । एउटा बँदेललाई देखेर ज्वाइँले वाण हाने तर त्यो बँदेल वाण लागेपछि ढुंगामा परिणत भयो । वाणले लागेर ढुंगामा तीनवटा चोसो बन्यो । ससुराले देख्यो भने लाज हुन्छ भनेर ज्वाइँले त्यो ढुंगा गोगनको रूखमा लुकाए । तर, ससुराले चाहिँ ‘वाण लागेर ढलेको सिकार (बँदेल) यहीँ थियो’ भन्दै धेरैबेर सिली (नृत्य) गर्‍यो । ससुराले धेरै बेर सिली गरेपछि ज्वाइँले भने, ‘मैले यहाँ बँदेललाई वाण हानेको थिएँ । तर, त्यो त ढुंगा पो भयो । लाज हुन्छ भनेर मैले त्यो ढुंगा उठाएर गोगनको रूखमा राखेको छु ।’
त्यो ढुंगा ज्वाइँले बोकेर उनीहरू फर्किए । त्यो ढुंगालाई छोङ्खा गाउँको नागीमा ल्याएर राख्ने उद्देश्य थियो । तर, झन् बोक्यो झन्झन् गह्रौं भएर बिसाउन खोज्दा ढुंगा चिप्लिएर एक्कासि माटोमा गाडियो । जति निकाल्न कोसिस गर्दा पनि नसकेपछि त्यो ढुंगा त्यहीँ रह्यो, जहाँ अहिले साकेला पूजा गर्ने गरिन्छ ।
यो मिथक हजारौं वर्ष पुरानो होइन । त्यस्तै वाणले लागेको बँदेल ढुंगामा परिणत भएको पनि तपसिलकै कुरा हो । तर, मुख्य कुरा यो मिथकले केही सय वर्षअघिसम्म पनि शिकार मारेपछि सिली (नृत्य) गर्ने गरिँदो रहेछ भन्ने संकेत गर्छ । तेस्रो हो, साकेला पर्वमा गरिने पशुपन्छी र कीटपतंग नृत्य ।
यस्ता आदिम कला र संस्कृतिबारे रुसका प्रथम मार्क्सवादी चिन्तक जर्ज प्लेखानोभले गज्जब सैद्धान्तीकरण गरेका छन् । आफ्नो पुस्तक ‘आर्ट एन्ड सोसल लाइफ’ मा उनले चर्चा गरेअनुसार, खेल अर्थात् नृत्यकला आदि भनेको काम अर्थात् श्रमको नक्कल हो । त्यसैले खेलभन्दा जेठो हो काम । त्यस्तो कुनै पनि खेल (कला) छैन जुन कामसँग सम्बन्धित नभएको होस् । आदिम मानिसहरूको नृत्य भनेको जंगली जनावरहरूको चालढालको पुनरुत्पादन हो । जस्तो कि इस्किमो जातिले सिल माछाको नक्कल दुरुस्तै उतार्छ । उत्तर अमेरिकी इन्डियनहरूले भैंसीको नक्कल गर्दै ‘भैंसी नाच’ नाच्छन् । ठीक त्यसैगरी साकेलामा पनि थुप्रै जंगली पशुपन्छीहरूको चालढालको नक्कल गरिन्छ साकेला सिली (नृत्य) गर्दा ।
साकेलामा सिली गर्दा सयौं प्रकारका नृत्य गरिन्छ । ती मूलभूत रूपमा सिकारी र कृषि जीवनसँग सम्बन्धित छन् । थोरैचाहिँ सभ्यता युगका सिलीहरू पनि रहेका छन् । सिकारी जीवनसँग सम्बन्धित दर्जनौं सिलीमध्ये केही सिलीहरू हुन्— चाप्चा सिली (बाघ नृत्य), ब्यार्पा सिली (भालु नृत्य), पिरा सिली (मृग नृत्य), रुमा सिली (थार नृत्य), रम्भो सिली (बँदेल नृत्य), रङ्किमी सिली (बाँदर सिली), याङा सिली (माछा नृत्य) इत्यादि । अध्येता कमलजंग राई (साक्खेवा सिली : एक अध्ययन, २०७३) का अनुसार, सिकार सिली पनि हुन्छ, जसलाई आप्तारुङ सिली भनिन्छ । यो सिली धनुकाँड भिरेर नाच्ने गरिन्छ ।
त्यस्तै गरेर थुप्रै पन्छीको नक्कल पनि गरिन्छ साकेला सिलीमा । त्यस्ता केही प्रचलित सिलीमा पर्छन्— तावा सिली (मयूर नृत्य), तातिमी सिली (चारेचरा नृत्य), बङ्कोटे सिली (बेसारा नृत्य), मोउवा सिली (कल्चौंडा नृत्य), वापा सिली (भाले नृत्य), धिवा सिली (डाँफे नृत्य), नार्कुवा/कुङ्केरा सिली (कर्‍याकुरुङ नृत्य), कुप्पु सिली (थिबिउ नृत्य), वाराङकेवा सिली (लाहाचे नृत्य) इत्यादि ।
त्यस्तै साकेला सिलीमा कीटपतंगको नक्कल पनि उतारिन्छ । त्यस्ता सिलीहरूमा पर्छन्— क्रावा सिली (गंगटो नृत्य), लभे सिली (जुका नृत्य), खासिमा सिली (झिँगा नृत्य), बब्लती सिली (पुतली सिली), कुप्पामा सिली (उपियाँ सिली), छिप्क सिली (माछाले खाने कीरा नृत्य) इत्यादि ।
पशुसँग सम्बन्धित सिली भनौं अथवा कीटपतंग र पन्छीसँग सम्बन्धित सिली– यी तीनैथरी सिलीले आदिम किराँती समाजको जंगली र बर्बर युगको सिकारी जीवनको प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर, आदिम मानवहरू सिकारमा मात्रै निर्भर चाहिँ कहिल्यै थिएनन् । मानिसको जीवनमा सिकार धेरैपछि मात्र सुरु भएको हो । जंगली युगको उच्च अवस्थामा धनुषवाण आविष्कार गरेपछि मात्र मानव पुर्खाहरूका लागि मासु नियमित भोजन बन्न पुगेको हो (फ्रेडरिक एङ्गेल्स, सन् १९८६, परिवार, निजी सम्पत्ति और राज्य कि उत्पत्ति) । यस हिसाबले हेर्दा साकेला सिली पनि जंगली अवस्थाको उच्चत्तम अवस्थापछि उद्विकास भएको नृत्य–कला हो । मेरो विचारमा यसको पूर्ण विकासचाहिँ बर्बर युगमा भयो ।
साकेला पर्वको प्राग्ऐतिहासिकता देखाउने अर्को पक्ष भनेको कृषि सिली हुन् । र, साकेला शब्दकै अर्को व्याख्या कृषिसँग सम्बन्धित रहेको छ । साकेला शब्दलाई विग्रह गर्दा ‘सा’ ले ‘अन्नको सह’ भन्ने अर्थ दिन्छ भने ‘केल्’ ले संरक्षक भन्ने अर्थ दिन्छ (तारामणि राई, विसं २०७१, साकेल्) । यसरी कोयी राईहरूमा साकेला शब्दको अर्थ कृषिसँग जोडेर गरिन्छ । हुन पनि हो, उँधौलीमा धरती सुत्छ, त्यसैले दुःख दिनु हुँदैन भनेर ढोल–झ्याम्टा बजाइँदैन । साकेला सिली (नृत्य) पनि खासै गरिँदैन । तर, उँभौलीमा चाहिँ खेतीपाती गर्नुपर्ने भएकाले धरतीलाई जगाउन ढोल–झ्याम्टा बजाउँदै साकेला नृत्य गर्ने गरिन्छ । एक हिसाबले धरती जगाउने पर्व पनि हो साकेला । त्यसैले साकेला कृषिसँग सम्बन्धित पर्व हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन ।
साकेलामा कृषिसँग सम्बन्धित चासिम/चासुम सिली गरिन्छ, जसमा भस्मे फाँड्ने, अन्नबाली लगाउने, उठाउने नृत्य र अन्तिममा खानेसम्मका सिली पर्छन् । लाली ध्येल्मा सिली (बीउ उखेल्ने नृत्य), चप्लइमा सिली (धान–कोदो रोप्ने नृत्य), चासामा सिली (धान–कोदो गोड्ने नृत्य), चाधाम्मा सिली (धान–कोदो झाँट्ने–टिप्ने नृत्य) इत्यादि । कृषिसँग सम्बन्धित सिलीलाई खारु सिली पनि भनिन्छ, जसमा अन्नबाहेक कपास छर्नेदेखि कपडा बुन्नेसम्मका सिलीहरू पर्छन् । बर्बर युगको मध्यअवस्थामा मानव पुर्खाहरूले पशुपालन र खेतीपाती सुरु गरेका थिए (एंगेल्स, ऐजन) ।
त्यसैले साकेलाको कृषि सिलीचाहिँ सीधैं बर्बर युगको उपज हो । त्यस युगमा सुरु भएको कृषि सिली (नृत्य) हरूको परिष्कार सभ्यको युगमा आउँदा भएको देखिन्छ । विविधताका हिसाबले सबैभन्दा बढी सिली सिकारी युगका छन् । त्यसपछि कृषि युगका छन् । हुँदै नभएका त होइनन् तर सिकारी र कृषि सिलीका तुलनामा आधुनिक युगका सिलीहरू न्यून छन् ।
रमाइलो विषय के भने मानवशास्त्रीहरू खेतीपातीको सुरुआत महिलाबाट भएको मान्छन् । किराँत राईहरूको मुन्दुम, मुन्दुमी मिथक र साकेला सिलीले ठ्याक्कै यही कुरा भनिरहेको छ । मुन्दुमअनुसार, नियामा भन्ने आदिम थलोबाट आएका हुन् किराँती पुर्खाहरू । र, त्यो नियामामा किराँतीहरूले खेती सुरु गरेको सबैभन्दा पुरानो अन्न भनेको सायुङ्मा (सामा) हो जुन ‘मिलेट’ प्रजातिमा पर्छ । त्यसपछि कागुनी हो । त्यो पनि ‘मिलेट’ प्रजातिमै पर्छ । मुन्दुमअनुसार, यी अन्नहरूको खेती आदिम बजु चिनिमाले सुरु गरेकी थिइन् । त्यस्तै खालिङ राईहरूमा बजु खम्निम्याले खेती सुरु गरेको मिथक प्रचलित छ ।
कागुनी अन्नको खेती दस हजार वर्षअघि विश्वमै सबैभन्दा पहिले सिनो–तिब्बतीका पुर्खाहरूले चीनको ह्वाङहो नदीको माथिल्लो र मध्य–उपत्यकामा सुरु गरेका थिए (सु बिङ र अन्य, सन् २०००, ‘वाई क्रोमोजोम हाप्लोटाइप्स् रिभिल प्रिहिस्टोरिक माइग्रेसन टु हिमालय’) भन्ने कुरा पुरातात्त्विक खोजीले प्रमाणित गरिसकेको छ ।
यससँग किराँती पुर्खाहरू सम्बन्धित हुन सक्ने सम्भावना कागुनीलाई सिनो–तिब्बती भाषामा फ्रो (भान ड्रिम, सन् २००८, ‘टु ह्विच ल्याङ्ग्वेज फ्यामिली डज् चाइनिज बिलङ अर् ह्वाट इज् ए नेम ?’) सँग मिल्दोजुल्दो चाम्लिङ राई भाषामा फेरों, बान्तवा राई भाषामा फेसाक, फेसा भन्नुले देखाउँछ । त्यस्तै सामा र कागुनी अन्न पितृहरूलाई चढाउने पवित्र अन्न मानिनुले पनि यी अन्न खेती गर्नेहरू किराँतीका पुर्खाहरू थिए कि भन्ने सम्भावना औंल्याउँछ । त्यस हिसाबले हेर्दा ‘मिलेट’ प्रजातिका अन्न र खेतीसँग हजारौं वर्षअघि नै किराँती पुर्खाहरू परिचित थिए । र, साकेला सिलीका कृषिनृत्यहरू कुनै न कुनै रूपमा यससँग सम्बन्धित छन् ।
दोस्रो कुरा, साकेला सिली गर्दा पनि पुरुषहरूले सिकारसँग सम्बन्धित नृत्य गर्छन् भने महिलाहरूले कृषिसँग सम्बन्धित नृत्य गर्छन् । यसले पनि कृषिसँग महिलाहरूको सम्बन्ध रहेको देखाउँछ । तेस्रो कुरा, यसपटक भोजपुर जाँदा मैले थाहा पाएँ— बान्तवा राईहरूको पितृकार्य लेवा गर्दा पनि दिवापा (पितृ) र मोङ्छामा (मातृ) को पूजा गरिँदो रहेछ । त्यसमा पनि मोङ्छामा (मातृ) लाई चाहिँ अन्नका बालाहरू चढाइँदो रहेछ । यो पनि कृषिसँग महिलाहरूको सम्बन्ध छ भन्ने सांस्कृतिक तथ्य नै हो ।
सिकारी र कृषि नृत्यका आधारमा भन्दा किराँतीहरूले दुईवटा युग (जंगली र बर्बर) लाई साकेला सिलीका रूपमा भव्य दस्तावेजीकरण गरेका छन् । यस हिसाबले हेर्दा साकेला विशाल सांस्कृतिक भण्डारण (डिपोजिट) हो, जसका आधारमा किराँतीहरूको समाजविकासको अध्ययन गर्न सकिन्छ । उनीहरूको ज्ञान निर्माण र संरक्षण पद्धतिबारे अध्ययन गर्न सकिन्छ । खासमा मौखिक ज्ञानका आधारमा निर्देशित हुने समुदायको दर्शन, इतिहास, आदिम बसाइसराइजस्ता विषयहरूको अध्ययन गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम साकेला र यस्तै सांस्कृतिक अभ्यासहरू हुन् ।
साकेलाबारे यति चर्चा गरिसकेपछि उँधौली (छिरिनाम) र उँभौली (धिरिनाम) का बारेमा चर्चा नगर्दा अपूरो हुने छ । राईहरूमा मात्रै नभएर सिङ्गै किराँती समाजमा उँधौली र उँभौलीको अवधारणा र अभ्यास रहेको छ ।
किराँतीहरूका अनुसार, जब माछाहरू उँधो लाग्छन्, जब चराहरू उँधो लाग्छन्, विशेषगरी कर्‍याङकुरुङ चरा उँधो लाग्छन् तब समय उँधो लागेछ, हिउँद सुरु भएछ भनेर बुझिन्छ । जब माछाहरू उभो लाग्छन्, जब चराहरू उँभो लाग्छन्, विशेष गरेर कर्‍याङकुरुङ चरा उँभो लाग्छ तब उँभौली सुरु भएछ भनेर बुझिन्छ ।
उँधौलीमा चिसो हुने भएकाले न्यानोको खोजी गर्दै माछा र चराहरू ओरालो लाग्छन्, उँभौलीमा गर्मी हुने भएकाले चिसोको खोजीमा माछा र चराहरू उँभो लेकतिर लाग्छन् । यसरी किराँत पुर्खाहरूले समयलाई मोटो गरी दुई खण्डमा विभाजन गरेको देखिन्छ । उँधौली र उँभौलीको अवधारणा कृषि जीवनमा प्रवेश गरिसकेपछि किराँती पुर्खाहरूले विकास गरेको कुरा हो । जुलियन स्टेवार्ड र मार्बिन ह्यारिसले विकास गरेको पर्यावरण सिद्धान्तको आँखिझ्यालबाट पर्गेलेर यसलाई अझ विस्तृतमा केलाउन सकिन्छ । त्यो अर्कै पाटो छ ।
तर उँधौली र उँभौली भनेको समयलाई हिउँद र बर्खा भनेर दुई भागमा बाँड्नु मात्र होइन, यो पर्यावरणसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन । यो हो सामाजिक–पारिवारिक नेतृत्वसँग पनि जोडिएको पक्ष । हिउँदलाई किराँत राईहरूमा महिलाको समय मानेर संस्कार गरिन्छ । त्यसकारणले त महिलालाई शीतलता र सिञ्चन गर्ने पानीका रूपमा लिँदै उँधौलीमा छुनेमाङ गरेर पोथी कुखुराको भोग दिइन्छ । त्यस्तै बर्खालाई पुरुषहरूको समय मानेर संस्कार गरिन्छ । त्यसकारणले त पुरुषलाई ताप र आगोको रूपमा लिँदै उँभौलीमा न्वागी गरेर भालको भोग दिइन्छ (नारदमुनि हार्तम्छाली : ‘किराँत सांस्कृतिक सम्पदा सुप्तुलुङ’) ।
र, यो पनि हो– मातृसत्तात्मक चरणबाट माता र पिताहरूको संयुक्त नेतृत्व भएको युगको प्राग्ऐतिहासिक सांस्कृतिक चिनो । यस आधारमा सांस्कृतिक रूपमै किन नहोस्, लिंगीय समानताको सन्देश पनि हो उँधौली र उँभौली । समाजमा क्रियाशील यस्ता सयौं प्रगतिशील अभ्यासहरूलाई जगेर्ना र प्रवर्द्धन किन नगर्ने ?
प्रकाशित : मंसिर २८, २०७६ १०:१६